ဘဝမှတ်တိုင်: March 2015
♪ ဘောလုံးချစ်သူများအတွက် အသင်းလိုက် Eng-Myanmar Keyboard မျိုးစုံ ♫
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Keyboard လေးကတော့ ဘောလုံးအသင်းတွေရဲ့ တံဆိပ်တွေနဲ့ Keyboard လုပ် ထားတာပါ။ အသင်းတွေကတော့ အစုံအလင်ပါပဲ။ မန်ယူကတော့ မနေ့ကတင်ထားပေးတယ်ဗျာ။ အခု တင်ပေးလိုက်တဲ့ အသင်းတွေကတော့ ချယ်လ်ဆီး ၊ အာဆင်နယ် ၊ မန်စီးတီး ၊ လီဗာပူး ၊ ရီးရဲလ် ၊ ဘာစီလိုနာ အစရှိတဲ့အသင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Eng-Myanmar နှစ်မျိုးလုံးရိုက် နိုင်တဲ့ Keyboard တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Frozen Keyboard ကိုပဲ Man-U စတိုင်မျိုးလေးဖြစ်သွားအောင် ပြောင်းထားတာဖြစ် ပါတယ်ဗျာ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့အသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ Keyboard လေးတစ်ခုပါဗျာ။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသင်းရဲ့ Keyboard ကိုအောက်မှာတစ်ခုချင်ဒေါင်းယူနိုင်အောင် ခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။
Credit to ==> Aung Pyay Thein
Manchester City Keyboard
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/25/2015 10:07:00 pm0comments
ဖုန်းအားသွင်းတာ အားပြည့်သွားရင် အလန်းပေးတဲ့ - Full Battery & Theft Alarm
ဖုန်းအားသွင်းတာ အားပြည့်သွားရင် အလန်းပေးတဲ့ - Full Battery & Theft Alarm apk လေးကတော့ ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူတွေဆောင် ထားသင့်တဲ့APk ကောင်းလေးပါ
ခုနောက်ပိုင်း ဖုန်းအားသွင်းတာ ကြာလို့ ဖုန်းအပူရှိန်နဲ့ ဖုန်းပေါက်ကွဲတာတွေ မီထလောင်တာတွေ စတဲ့ အန္တရာယ်တွေမှ ကင်းလွတ်အောင် ဒီ APk လေးဖုန်းမှာ
Install လုပ်ပြီး ဖုန်းအားသွင်းနိုင်ပါပြီ ( ပုသိမ်နည်းပညာ )
To become beta user please join this group : groups.google.com/forum/#!forum/full-battery-theft-alarm-test-group
Offered By : Arda CUHADAROGLU
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/25/2015 10:03:00 pm0comments
Xiaomi Redmi Note & Note 4G ဖုန်းများကို အလွယ်တကူ Root လုပ်နိုင်ပါပြီ
အမေးများလာတဲ့ Xiaomi Redmi Note & Note 4G ဖုန်းများကို
Root လုပ်နည်းကို အားလုံးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အခုကျနော် ရှင်းပြပေးသွားမယ့် နည်းလမ်းများသည်
ဒီ Xiaomi Redmi Note & Note 4G ဖုန်းများကို Root လုပ်နည်းနဲ့
Root Access ရရှိနိုင်တဲ့ Root Tool များနဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံကို
စကားမစပ် ဒီ Xiaomi Redmi ဆိုင်ရာ ဖုန်းကို Root လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့
Firmware တင်နည်းကိုပါ မသိထားလို့ မဖြစ်ဘူးနော် တော်ကြာ Root လုပ်တာ
တော့ အဆင်ပြေတယ် မပြေတဲ့အခါကျ တွပ်ပီ ကံမကောင်းပဲ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ
ဖြစ်နေရင်တော့ အဟ... မပူပါနဲ့ ဟိုအရင်ကျနော်တင်ပေးထားဖူးပါတယ်
အသစ်သွင်သစ်နဲ့ သိပ်လန်းချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူများအတွက် Offical MIUI ROM တင်နည်း For Redmi 1S, Mi4, Mi3, Note, Pad အပြည့်အစုံ
မိမိဖုန်းကို Root လုပ်ခြင်းကိစ္စ မစမှီတော့
မိမိဖုန်းရဲ့ Data များအားလုံးကို Backup လုပ်ထားသင့်ပါတယ်
ဖုန်းရဲ့ Data များနဲ့ App များကို Backup လုပ်နည်းကို ကျနော်
ဟိုတလောက ဖုန်းမှာတင် လုပ်နည်းနဲ့ ကွန်ပျူ တာကနေလုပ်ယူ
ဖုန်းမှာတင် Backup apk များကို အသုံးပြု ပြီး
Backup အလွယ်တကူ လုပ်ယူနည်းကို အောက်လင့်မှာ ၀င်ဖတ်ပေးပါ။
ဖုန်း System တစ်ခုလုံးကို Backu and Restore ဆိုင်ရာ ဖုန်းမှာတင် အလွယ်တကူ လုပ်ယူနည်းအပြည့်အစုံ
ဖုန်းရဲ့ Data များနဲ့ App များကို ကွန်ပျူ တာကနေ
Backup Tool များကို အသုံးပြု ပြီး အလွယ်တကူ Backup လုပ်
ယူနည်းကိုတော့ အောက်ကလင့်မှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ
ဖုန်း System တစ်ခုလုံးကို Backup & Restore လုပ်ဖို့ရန်အကောင်းဆုံး ဆော့ဝဲများနဲ့ အသုံးပြုနည်း အပြည့်အစုံ
Backup လုပ်နည်း Restore လုပ်နည်းကို နားလည်ပြီးရင်တော့
Xiaomi Redmi Note & Note 4G ဖုန်းများကို အလွယ်တကူ
Root အလွယ်လုပ်နည်းကို အောက်မှာ ဆက်လေ့လာကြည့်ပါ။
Framaroot-1.9.3.apk Method ဖြင့် Root လုပ်နည်း
ကျနော် Google တစ်ခွင်ပတ်ရှာကြည့်တော့ ဒီ Xiaomi Redmi Note & Note 4G ဖုန်းများကို
ကွန်ပျူ တာမလိုပဲ Root Access အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်တဲ့ Root Apk လေးကိုတွေ့ပါတယ်။
အဲဒါကတော့ လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်တဲ့ Framaroot Apk လေးပါ။
ဒီ Apk မှာတောင်မှာ ဗားရှင်း Framaroot-1.9.3.apk နဲ့မှ အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းထွက်ရှိထားတဲ့ Update ဗားရှင်းတွေလည်း အဆင်ပြေလောက်မှာပါ။
ဒီ Xiaomi Redmi Note & Note 4G ဖုန်းများကို ဒီ Framaroot Apk လေးနဲ့
Root Access ရရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Apk လေးနဲ့ Root လုပ်နည်းကိုတော့
အောက်ကလင့်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့တကွ ရှင်းပြထားပါတယ် လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
တစ်ခြားသော One Click Root Apk ဖြစ်တဲ့ Towelroot apk နဲ့
Root လုပ်နည်းကိုတော့ အောက်ကလင့်မှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
မြည်သည့်ဖုန်းကိုမဆို 4.2.2 အထက် ဖုန်းအားလုံးကို One Click နဲ့ Root အလွယ်တကူ လုပ်နည်း (ကွန်ပျူ တာမလို)
Root Genius Method ဖြင့် Root လုပ်နည်း
ဒီတစ်ခါ Xiaomi Redmi Note & Note 4G ဖုန်းများကို
Root Genius Tool ဖြင့် One Click နဲ့တင် Root Access ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Root Tool လေးကိုအသုံးပြု မယ်ဆိုရင်တော့ Root လုပ်မရဖြစ်နေတဲ့
တော်တော်များများ Phone or tablet များကို တစ်ချက်တည်းနှိပ်ရုံနဲ့
Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ One Click Root tool ဖြစ်ပါတယ်။
Root Genius tool ဖြင့် Root အလွယ်လုပ်နည်းကိုတော့
Phone or tablet များကို တစ်ချက်တည်းနှိပ်ရုံနဲ့ Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Root Genius Method
Updater app ကိုအသုံးပြု ပြီး Root လုပ်နည်း
ဒီတစ်ခါတော့ Xiaomi Redmi ဖုန်းတွေမှာ တိုက်ရိုက်ပါလာတဲ့
Updater app ကိုအသုံးပြု ပြီး Xiaomi Redmi Note & Note 4G ဖုန်းများကို
အလွယ်တကူ Root လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဆက်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
How to Root Xiaomi Redmi Note & Note 4G (Official)
1-) Download copy to external SD card
2-) Select updater app
3-) Select menu
4-) Select update package
5-) Select pathway to 'Rootonly_beta.zip'
6-) And install
7-) After reboot select security app
8-) Select permission app
9-) Check root tab
Well done you have root!!!
၁။ ပထမဆုံး RedMiNote_rootonly.zip အရင်ဒေါင်းလော့ရယူလိုက်ပါ။
၂။ ဒေါင်းလော့ရလာတဲ့ Zip ဖိုက်ကို မိမိဖုန်း SD Card သို့ ကူးထည့်လိုက်ပါ
ဘယ် Folder မှာမှ သွားမထည့်ပါနဲ့ ဒီအတိုင်း ထည့်လိုက်ရုံပါ။
၃။ ဖုန်းမှာ ပါလာတဲ့ Updater app ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ဖုန်းရဲ့ Menu Button ကိုနှိပ်ပါ၊ Select installation pack ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။
Select installation pack ဆိုတာကို နှိပ်ပြီးတာနဲ့ စောနားက
ဖုန်းရဲ့SD Card ထဲမှာထည့်ထားခဲ့တဲ့
‘Update.Zip’ OR RedMiNote_rootonly.zip ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
၄။ Update ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ Update Now သို့မဟုတ်
Update to New version ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်2Minutes လောက်စောင့်နေပေးလိုက်ပါ။
ဖုန်းပြန်တက်လာရင်တော့ Security App ကိုအသင့်ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။
Verify လုပ်ရန်အတွက် Security App ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Root Permission နေရာမှာ Enable သို့မဟုတ် Turn on ပေးလိုက်ပါ။
Root လုပ်နည်း Video Tutorial လေးကို Youtube လင့်ကနေ
တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/25/2015 10:00:00 pm 1 comments
ASUS Fonepad 8 K016 , Android 4.4.2 Kitkat ကို Root လုပ်နည်း
ASUS Fonepad 8 ကို Root လုပ်ချင်သူတွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပးလိုက်တယ်။
DOWNLOAD ROOT TOOL
DOWNLOAD ပြီးရင် folder ထဲမွာ FB recovey Luncher / adb-setup-1.3 နဲ့ UPDATE-SuperSU-v2.46 တို့ပါဝင်ပါတယ်။ UPDATE-SuperSU-v2.46 ကိုတော့ ဖုန်း SD Card ထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပါ....
အရင်ဆုံး adb-setup-1.3 ကို PC မှာ install လုပ်ထားပါ။ oneclick installer ပါ လုပ်တက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ပြီးရင် ဖုန်းမှာ Developer Option ဖော်ပြီး USB Debugging မှာအမှန်ြခစ်ထားပေးပါ။ adb driver လဲရပြီ USB Debugging လဲ လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် ဖုန်းကို pc နဲ့ချိတ်လိုက်ပါ။
အောက်ကပုံမှာလို FB recovey Luncher ဆိုတဲ့ Folder ကိုဖွင့်ပါ။ luncher လို့ရေးထားတဲ့ Windows Batch File ကို run လိုက်ပါ။
အောက်ကပုံမှာလို CMD တက်လာရင် ACCEPT လို့စာလုံးအကြီးနဲ့ရိုက် Enter ခေါက်ပေးပါ။
Enter ခေါက်ပြီးလို့အောက်ကပုံလိုပေါ်လာရင် သတိထားရမှာ ဖုန်းနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ USB ကြိုးကိုမပြုတ်ဖို့ ဂရုစိုက်ပါ။ သူက CWM Recovery ကို ခဏလေးပဲ အသုံးပြုလို့ရအောင်လုပ်ပေးမှာပါ။
ပြီးရင် T3 ဆိုပြီး စာလုံးအကြီးနဲ့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ ခဏနေရင် အောက်ကပုံတွေလိုတွေ့ရမှာပါ။ ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ သူလုပ်စရာရှိတာလုပ်ပြီးသွားရင် CWM Recovery ထဲကိုရောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
CWM recovery ထဲကိုရောက်သွားရင် install Zip / Choose Zip from SDcard / UPDATE-SuperSU-v2.46 / Yes - UPDATE-SuperSU-v2.46 / Reboot system now ဆိုပြီး အဆင့်ဆင့် သွားလိုက်ရင် ASUS Fonepad 8 K016 မှာ root ရသွားပါပြီ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/25/2015 09:53:00 pm0comments
XPERIA T2 ULTRA D5303_19.1.1.A.0.165 V4.4.3 ကို Root ပြီး မြန်မာ Font ထည့်မယ်
XPERIA T2 ULTRA SINGLE D5303_19.1.1.A.0.165 V4.4.3 ကို Root လုပ်ချင်သူတွေအတွက်ပါ...
ဒီဖုန်းအမျိုးအစားနဲ့ပါတ်သက်တာကိုတော့ ဒီလင့်မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ...
T2U-lockeddualrecovery 2.7.154-BETA. flashable.ZIP
အားလုံးဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင် FASTBOOT.ZIP ကို ကွန်ပျူတာရဲ့တနေရာမှာ ဇစ်ဖြည်လိုက်ပါ...
အဲဒီ FASTBOOT ဖိုလ်ဒါထဲကို BOOTD5303.IMG ကို ထည့်ထားပါ...
T2U-lockeddualrecovery2.7.154-BETA.flashable.zip, UPDATE-SuperSU-v2.02.zip နှင့် UPDATE-MYFONT. ZIP ကို ဖုန်းရဲ့ Sdcard ထဲကို ကူးထည့်လိုက်ပါ...
ဖုန်းရဲ့ setting ထဲမှာ usb debugging mode ကို On ပြီးရင် ဖုန်းကို power ပိတ်လိုက်ပါ..
ဖုန်းကို FASTBOOT MODE ၀င်ရန်အတွက် volume up ကိုနှိပ်ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ပါ..
fastboot folder ကိုဖွင့်ပြီးတော့ အဲထဲမှာ ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်ကနေ shift key ကိုဖိ right click နှိပ်ပြီး
open command promp here ကိုရွေးပါ.. command window ပေါ်လာရင်
fastboot flash boot bootd5303.img လို့ရိုက်ပြီး
အင်တားကီးကိုနှိပ်ပါ... ဖုန်းကို power ပြန်ဖွင့်ပြီး volume down ကို နှိပ်ပြီး
recovery mode ထဲကိုဝင်ပါ..
recovery mode ထဲ ရောက်သွားလျှင် install zip --> choose zip from sdcard ---> မှတစ်ဆင့်
T2U-lockeddualrecovery2.7.154-BETA.flashable.zip, UPDATE-SuperSU-v2.02.zip နှင့် UPDATE-MYFONT. ZIP ကို ရွေးပြီး တစ်ခုပြီးတခု install လုပ်ပါ...
D5303_19.1.1.A.0.165_kernel only.ftf ကို flash tool ထဲထည့်ပြီး flash လုပ်လိုက်ပါဦး.... ပြီးမှ ဖုန်း
ကို boot လုပ်ပေးလိုက်ပါ... Root ပြီးသွားပါပြီ...
Android နှင့်မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း မသိရင်သွားကြည့်ပါ။
Android Keyboard လို့အပ်မယ်ဆိုရင်သွားယူရန်
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/25/2015 09:49:00 pm0comments
Sony နောက်ထွက် Version တွေ အတွက် Bootloader Unlock လုပ်စရာ မလိုပဲ Root ဖောက်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးပါ အင်တာနက် ရှိမှ အဆင်ပြေမှာ နော် ကျွန်တော် အောက်မှာပေးထားတဲ့ Tools လေးကို အရင် ဒေါင်းလိုက်ပါ တစ်ခြားဖုန်းတွေ လည်းရပါတယ် ကျွန်တော် တော့ Sony Z1, Z မှာ စမ်းထားပီးပါပြီ အဆင်ပြေပါတယ်
ပြီးရင်တော့ ဖုန်းက Reboot မကျဘူးနော် ဒီကောင်လေးသုံးပီးတာတောင် Root ဆရာကြီး Super User မပေါ်ဘူးနော် သူ့အတွက် သီးသန့် Apk ကို ထည့်ပေးရမှာပါ အောက်မှာ ယူလိုက်ပါနော်
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပီးတော့ ဇစ်ဖြည်ပီးတော့ Apk ကို ထည့်ရမှာနော်
ပီးရင် မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဆိုတော့ မြန်မာ စာ ထည့်သုံးရမှာပေါ့ ဒီတော့ မြန်မာစာ ကို ၁၀၀% မှန်တဲ့ ဟာလေးနဲ့ ထည့်ကြရအောင် အောက် ကျွန်တော် ပေးထားတဲ့ Tools လေးထဲက နံပါတ် ၈ ကို နှိပ်ပီးတော့ ထည့်လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာ စာကို ကောင်းမွန်စွာ သုံးလို့ရပါ ပြီ ....Android Keyboard များကိုယူဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar Font Installer For Sony
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/25/2015 09:47:00 pm0comments
♪ Android Phones & Tablets Model ပေါင်းများစွာရဲ့ Driver များဒေါင်းယူနိုင်ပြီ ♫
Android Phone နဲ့ Tablet တွေအတွက် Driver ပေါင်းများစွာကို တဆင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ဗျာ။ Phone & Tablet Model ပေါင်း 32 မျိုးတိတိပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ နာမည်ကြီးပြီးလူသုံးများတဲ့ Samsung , HTC , Motorola , Amazon , Acer , Asus , Dell , Google , Huawei , Lenovo , LG , CoolPad , Oppo , Sony , ZTE , Xiaomi , အစရှိတဲ့ Handset တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ ဖုန်း Service သမားများ အတွက်တော့ အသုံးတည့်စေမှာပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေစုဆောင်းပြီး တင်ပေးလိုက်တာတော့မဟုတ် ပါဘူးဗျာ။ http://infoofandroids.blogspot.com/ ဆိုတဲ့ ပြည်ပမှ Blog တစ်ခုကနေကူးယူမျှဝေပေး တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒေါင်းလို့အဆင်ပြေအောင်လည်း Driver တစ်ခုကို Download Link သုံးမျိုးတင်ပေး ထားပါတယ်ဗျာ။ တစ်ခုအဆင်မပြေရင် နောက်တစ်ခုနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့ဗျာ။
Download Samsung Android Smartphone Driver Pack from here, here or here.
- Samsung Kies version 2.6.1.13105_7 (for Smartphones / Tablets before Galaxy Note III, including Galaxy S4, Note II, etc..)
- Samsung Kies version 3.2.13114_22 (only for Smartphones / Tablets after Galaxy Note III with Android 4.3 or newer)
Download HTC Android Smartphone Driver Pack from here, here or here.
- HTC Sync Manager version 2.4.11.0 (Supported Devices: HTC One max, HTC One, HTC One dual, HTC One mini, HTC Butterfly s, HTC J One, Desire L by HTC, Desire P by HTC, Desire Q by HTC, Droid DNA by HTC, HTC Butterfly, HTC Desire 200, HTC Desire 300, HTC Desire 500, HTC Desire 600, HTC Desire 600c dual, HTC Desire 601, HTC Desire 606w, HTC Desire 609d, HTC Desire C, HTC Desire SV, HTC Desire U, HTC Desire V, HTC Desire VC, HTC Desire X, HTC Droid Incredible 4G, HTC E1, HTC EVO 4G LTE, HTC J, HTC J Butterfly, HTC One S, HTC One S Special Edition, HTC One SC, HTC One SU, HTC One SV, HTC One V, HTC One VX, HTC One X, HTC One X+, HTC One XC, HTC One XL, HTC T327d, HTC T327w, HTC T329d, HTC T329w, INFOBAR A02.)
Download Motorola Android Smartphone Driver Pack from here, here or here.
- USB_Driver_TI (W370, W375, W376g, W377)
- USB_Driver_3.4.6_patch (W216, W230, W230x, W23x, W259, W270, W270x, W27x, W388, W396, W397, W397v)
- Driver installation instructions.
- Motorola Device Manager version 2.4.5
Download Amazon Android Driver Pack from here, here or here.
- Kindle Fire ADB drivers
Download Acer Android Driver Pack from here, here or here.
- USB_Acer_1.0_A21EA22FA23G_A (Stream, Liquid MT S120)
- USB_Acer_1.0_A23G_A (Liquid mini Ferrari)
- USB_Acer_1.0_A40I_A (Liquid Gallant E350, I110, S500)
- USB_Acer_1.0_A41J_A (Iconia B1-710, Iconia B1-711, Z110, Z120, Z130, Z150)
- USB_Acer_1.0_A42J_A (Iconia A1-810, Iconia A1-811, Liquid S510, Liquid S520, V370)
- USB_Acer_1.0_AK330.E350 (Acer Liquid Gallant Duo AK330, E350)
Download Asus Android Driver Pack from here , here or here.
- ASUS Android USB drivers for Windows_20120209 (PadFone, Transformer Pad, Nexus7, TF101, TF101G, TF101-WiMAX, SL101, TF300T, TF300TG, TF300TL, TF201, TF700T, ME171, A66, TF700K).
Download Asus Android Driver Pack2from here, here or here.
- ASUS Pad PC Suite v1.0.42
- nexus7_usb_driver_r06_windows (Nexus 7)
- Universal_Naked_Driver_0.72 (Google Nexus 4, Google Nexus 10, Google Nexus S, Google Nexus Q)
Download Dell Android Driver Pack from here, here or here.
- Fastboot+ADB (Dell Streak7)
Download Google Android Driver Pack from here, here or here.
- installer_r20.0.3-windows (Nexus Series)
- installer_r21.1-windows (Nexus Series)
Download Huawei Android Driver Pack from here, here or here.
- Handset WinDriver version 1.02.03.00 (Ascend D1, U8860 Honor)
- Huawei_G300_drivers (G300)
Download Huawei HiSuite from here, here or here. (HiSuiteSetup_v1.8.10.2006 & HiSuite-1.6.10.08-TeamAndroid).
Download Lenovo Android Driver Pack from here, here or here.
- LePhone2.0 (A750, LePhone & LePad)
Download LG Android Driver Pack from here, here or here.
- B2CAppSetup - LGMobile Support Tool version 1.6.9.0 (Optimus LTE, P970, P990, P930)
- MT6577 USB VCOM drivers
- Microsoft ActiveSync/WMDC
13. KT Tech.
Download KT Tech Android Driver Pack from here, here or here.
- KTTechInstaller_20120208 (EV-S100)
Download Coolpad Android Driver Pack from here, here or here.
Download Oppo Android Driver Pack from here, here or here.
- Oppo PhoneAssistant (Finder X903, X905, X907)
- 20130118143625DCeauIiyU0 - USB Drivers
Download Pegatron Android Driver Pack from here, here or here.
Download Pantech Android Driver Pack from here, here or here.
- PVEGA_Install_V4_14_1_0 (Secret Note VEGA IM-A890S, Secret Note VEGA IM-A890K, Note secrete VEGA IM-A890L, A VEGA LTE IM-A880S, IRON VEGA IM-A870S)
- Pantech_PCSuite_v1.0_20110523 (Crossover P8000)
Download Sky Android Driver Pack from here, here or here.
- UniUSBDriver_v3.0.6 (A650, A710, A730, A760, A770, A800, A820, A830, A840, A850, A860)
- PSKY_Install_V4_0_16_0 (A730, A860)
Download Sharp Android Driver Pack from here, here or here.
- Windows_USBDriver_FXPlus - Sharp USB Driver Installer version 1.0.6.0
- SH-02D_driver (Sharp AQUOS SH-02D)
Download Sony Android Driver Pack from here , here or here.
- Sony PC Companion_2.10.094_Web
- latest Sony PC Companion_Web_2.10.181
- Fastboot driver - downloadinf
Android tablets & phones USB Driver Pack. You can download it from here, here or here.
Download ZTE Android Driver Pack from here, here or here.
- ZTE Handset USB Driver 5.2066.1.6
- ZTE Handset USB Driver 5.2066.1.7
- ZTE Handset USB Driver 5.2066.1.8
- JoinMe latest version 1.0.3.681
- JoinMe & Driver ZTE F101
Download Xiaomi Android Driver Pack from here, here or here.
- Miui V4 & V5 Driver
Download Rockchip Android Driver Pack from here, here or here.
- RK2918 Drivers (32bit: xp, 2000, vista, win7 & 64bit: vista, win7)
- RK3066 Drivers (32bit: xp, 2000, vista, win7 & 64bit: vista, win7)
- RK3188 Drivers (32bit: xp, 2000, vista, win7, win8 & 64bit: vista, win7, win8)
Download TeleEpoch Android Driver Pack from here, here or here.
Download Hisense Android Driver Pack from here, here or here.
Download Kyocera Android Driver Pack from here, here or here.
- kc02us_setup_x86 (Hydro ELITE C6750, Kona S2151, Hydro XTRM, Torque E6710, Hydro C5170, Event C5133, Rise C5155, Dura Series, Milano, Echo)
- kc02us_setup_x64 (Hydro ELITE C6750, Kona S2151, Hydro XTRM, Torque E6710, Hydro C5170, Event C5133, Rise C5155, Dura Series, Milano, Echo)
- scp8600_setup_x86 (Zio SCP-8600)
- scp8600_setup_x64 (Zio SCP-8600)
- m6000_setup (Zio M6000)
- Setup2.2_futuredial (Zio M6000).
Download Mediatek Android Driver Pack from here, here or here.
Download Alcatel Android Driver Pack from here, here or here.
- ALCATEL_ADB_ Driver Qualcomm_ADB (Qualcomm platform)
- Download_Driver_1.0_Setup (MTK platform)
Download SK Telesys Android Driver Pack from here, here or here.
- SK-S100_V1_0_1710 (SK-S100)
- SK-S150_V1_0_1801 (SK-S150)
- UniUSBDriver_v3.0.3 (SK-T100, SK-900, SK-800, SK-700)
Download here W.Desktop2.0 version 2.3.9.
Download Toshiba Android Driver Pack from here, here or here.
- TC00543100A_usb_drivers (Excite AT10-A / AT15-A, Excite AT10LE-A / AT15LE-A,Excite AT10PE-A / AT15PE-A, Excite AT270, Excite AT300, Excite AT300SE, REGZA Tablet AT500, REGZA Tablet AT501, REGZA Tablet AT503, REGZA Tablet AT570, REGZA Tablet AT703, REGZA Tablet AT830, TOSHIBA AT330)
Download Intel Android Driver Pack from here, here or here.
Download iFive Android Driver Pack from here, here or here.
- x32 & x64 driver (iFive 2S/X2, mini3, 2S HD, X3)
- DM_Setup Update Tool
1. Download and install Moborobo, there isabig chance to solve your problem. You can download the version 2.1.5.856 from here, here or here.
2. Download PdaNet 4.12, automatically installs drivers for your Android device.
3. Try the Universal ADB Driver. You can download it from here, here or here.
To install the Android USB driver on Windows XP:
- Connect your Android-powered device to your computer's USB port. Windows will detect the device and launch the Hardware Update Wizard.
- Select Install fromalist or specific location and click Next.
- Select Search for the best driver in these locations; un-check Search removable media; and check Include this location in the search.
- Click Browse and locate the USB driver folder.
- Click Next to install the driver.
To install the Android USB driver on Windows Vista:
- Connect your Android-powered device to your computer's USB port. Windows will detect the device and launch the Found New Hardware wizard.
- Select Locate and install driver software.
- Select Don't search online.
- Select I don't have the disk. Show me other options.
- Select Browse my computer for driver software.
- Click Browse and locate the USB driver folder. As long as you specified the exact location of the installation package, you may leave Include subfolders checked or unchecked—it doesn't matter.
- Click Next. Vista may prompt you to confirm the privilege elevation required for driver installation. Confirm it.
- When Vista asks if you'd like to install the Google ADB Interface device, click Install to install the driver.
To install the Android USB driver on Windows 7:
- Connect your Android-powered device to your computer's USB port.
- Right-click on Computer from your desktop or Windows Explorer, and select Manage.
- Select Devices in the left panel.
- Locate and expand Other device in the right panel.
- Right-click the device name and select Update Driver Software. This will launch the Hardware Update Wizard.
- Select Browse my computer for driver software and click Next.
Credit to ==> http://infoofandroids.blogspot.com/
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/25/2015 09:34:00 pm0comments
♪ ဘောလုံးချစ်သူများအတွက် အသင်းလိုက် Eng-Myanmar Ke...
ဖုန်းအားသွင်းတာ အားပြည့်သွားရင် အလန်းပေးတဲ့ - Full...
Xiaomi Redmi Note & Note 4G ဖုန်းများကို အလွယ်တကူ ...
ASUS Fonepad 8 K016 , Android 4.4.2 Kitkat ကို Roo...
Sony 4.3 & 4.4.2 အတွက် Root & Myanmar Font လုပ်နည်...
♪ Android Phones & Tablets Model ပေါင်းများစွာရဲ့ ...